Auphonic: Ku Habbooneel Audio Podcast-kaaga Hal-Guji | Martech Zone
Auphonic: Ku -fiicso codkaaga Podcast-ka Hal-Guji
Jimce, Maarso 17, 2017 Isniintii, September 4, 2017 Douglas Karr
Markii aan dhisnay kuweena Beesha Martech, waan ogayn inay qiimo ugu fadhido shabakadeena aqristayaasha badan si aan u cusbooneysiino una wadaagno aqoonta ay barteen. Markii aan wax ka qoray codka Podcast, Temitayo Osinubi la wadaagay qalab la yaab leh oo la yiraahdo Auphonic. Illaa aad ka mid tahay injineerrada codka, hagaajinta codka fiidiyowyadaadu waxay noqon kartaa hawl cabsi badan. Iyo qalabka wax lagu qoro sida Garaashka ha ku bixin waxyaabo badan habka qalabka wax lagu kiciyo - waa inaad ogaataa waxay yihiin awoodaha.
Temitayo wuxuu ii tilmaamay jihada Auphonic, codsi ku saleysan websaydh iyo desktop oo hagaajinaya hodannimada iyo mugga codkaaga Podcast-ka. Teknoolojiyada xitaa waxay caadi ka dhigi kartaa hal wado oo hal ku hadla uu ka cod dheer yahay kan kale… quruxsan cajiib ah. Waxaan siiyay tijaabo tijaabo ah oo aan ku duubay mid ka mid ah duubitaankeyga isla markiibana waan xirxiranahay oo waxaan iibsaday labadaba codsiyada desktop-ka - mid ka mid ah isku habeyn hal waddo ah iyo mid kale oo loogu talagalay iskuxirid badan.
Xusuusin dhinac ah: Temitayo ayaa igu wareystay podcastkiisa waxayna ahayd waqti fiican - halkan dhegeyso.
The Avehonic Leveler waa indheer garad Processor-ka faylka maqalka 'Desktop Datch Audio' kaas oo falanqeynaya codkaaga isla markaana saxaya kala duwanaanshaha heerarka u dhexeeya kuwa ku hadla, muusikada iyo hadalka iyo inta u dhexeysa feylal badan oo maqal ah si loo gaaro guud ahaan qeylo dheellitiran.
Waxaa ka mid ah a Run xadidan, bartilmaameedyada guud Heerarka Dhawaaqa (EBU R128, ATSC A / 85, Podcasts, Mobile, iwm) oo otomaatig ah Sawaxanka iyo Hum Yaraynta algorithms.
Avehonic Leveler waa diyaar u ah Mac OS X 10.6+ (64bit) iyoWindows 7+ (32bit ama 64bit).
Auphonic Multitrack ayaa qaadata waddo badan oo maqal ah oo cod ah, falanqeeyaa oo u falanqeeyaa iyaga shaqsi ahaan iyo sidoo kale isku-dhafan wuxuuna abuuraa isku-darka ugu dambeeya si toos ah. Isku dheellitirnaanta, isku-buufinta kala-firdhinta firfircoon, gaaska, buuqa iyo yareynta qiiqa, ka-saarista crosstalk, ducking iyo shaandhaynta waa lagu dabaqi karaa si toos ah sida ku cad falanqaynta track kasta. Caadiyan qaylada iyo xadaynta ugu sarreysa ee dhabta ah ayaa loo adeegsadaa isku darka kama dambaysta ah.
Auphonic Multitrack waa loo dhisay barnaamijyada hadalka ku badan waana loo heli karaa Mac OS X 10.6+ (64bit) iyo Windows 7+ (32bit ama 64bit).
Qaar ka mid ah astaamaha hagaajinta buuqa weyn waxaa ka mid ah:
Sinnaanta Lebeler: The Adaptive Leveler wuxuu dheelitirayaa kala duwanaanta dhawaaqa, isagoo wadada oo dhan ka dhigaya mid sare oo xitaa xitaa.
Sifeeyaha Sare ee Sare: Filterka 'High Pass Filter' wuxuu meesha ka saaraa qulqulatooyinka hooseeya ee dhibta leh inta lagu jiro wadada.
Sawaxanka iyo Hum dhimista: Astaantan ayaa ka saareysa codka asalka wadada, xitaa haddii ay jiraan kala duwanaansho. Habkaani sidoo kale wuxuu gebi ahaanba ka saarayaa duubista xarigga korontada.
Isweydaarsiga: Mar kasta oo isla codka la duubo laba mikrofoon oo kala duwan, qaabkani wuxuu kaliya ka dhigayaa isticmaalka wadada ugu weyn. Crossgate wuxuu kaloo ka shaqeeyaa inuu si buuxda u tirtiro dhawaaqyada guuxa.
Waxaan si aad ah u isticmaalayay labada codsiba waana in la ogaadaa inaysan samayn mucjisooyin. Waxaan ku lahaa hummaag aad u saraysa mid ka mid ah barnaamijyadayda wararka '' Si kastaba ha noqotee, runtii waan jeclahay qalabkan waxaanan ku helay natiijooyin aan caadi ahayn illaa hadda! Thanks to Temitayo!
Tags: Leveler la qabsigahagaajinta maqalkaaftahan ahbareeye auphonicprocessor auphonic multitrackCrossgateSifeeyaha Sare ee Sareheerka iTunesqalab Lugoodtiro badanSawaxanka iyo Hum Yarayntaqalabka Podcasttemitayotemitayo osinubiqalab mugga
Waxaan aaminsanahay B2B Sayniska Warbaahinta Suuqgeeda Guusha waa la buunbuuniyey
Sida Loogu Diiwaan Galiyo Audio Quality Audio adoo isticmaalaya Webka